Xaaska Mikel Arteta oo soo hadashay kaddib markii macallinka Kooxda Arsenal uu haleelay xanuunka Coronavirus – Gool FM
(London) 15 Mar 2020. Xaaska Mikel Arteta ayaa soo hadashay kaddib markii macallinka Kooxda Arsenal uu haleelay xanuunka coronavirus, waxaana ay sheegtay inuu hadda hoggaamiyaha Gunners ka soo reynayo.
Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa si wanaagsan u soo kabanaya kaddib markii laga healy caabuqa coronavirus sida ay warinayso xaaskiisa.
Macallinka Gunners ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhacay cudurkan fiidnimadii Khamiista, waxaana la joojiyay dhammaan kulammada horyaalka Premier League illaa iyo 3-da bisha April natiijadaas awgeed.
Si kastaba ha noqotee, Xaaska Arteta ee Lorena Bernal waxay dib ugu xaqiijisay taageerayaasha in saygeedu uu ku socdo wadada soo kabashada: “Xaaladaha aan ku jirno hadda, waxaan dareemay mas’uuliyadda inaan qeybsanno xaaladdeenna,” Bernal ayaa sidaas ku soo qoray Instagram-ka.
“Waxaan rabaa inaan idhaahdo mahadsanid qof kasta oo soo diray farriin wanaagsan, qoraallo, emailo iyo wicitaanno, runtii waa wax aad u badan, waan fahamsanahay inaad sidoo kale rabtaan inaad ogaataan waxa socda.
“Saygeygu wuxuu dareemayaa caafimaad wanaagsan, wuuna fiican yahay.”
Horyaalka Premier League ayaa qorsheeyay inuu qabto kulan deg deg ah Khamiista soo socota si looga wada hadlo sidii horay loogu socon lahaa inta ka dhiman xilli ciyaareedkan oo horyaalka laga yeeli lahaa.
Manchester United oo loo sheegay qiimaha ay si joogto ah ugula wareegi karto Odion Ighalo